အစားအစာ စားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော စကားအသုံးအနှုန်းအမျိုးမျိုး (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဝေါ်ဟာရ သင်ခန်းစာ) - Myanmar Network
အစားအစာ စားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော စကားအသုံးအနှုန်းအမျိုးမျိုး (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဝေါ်ဟာရ သင်ခန်းစာ)
Posted by Soe Soe Win on July 10, 2014 at 11:36 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယနေ့သင်ခန်းစာမှာhttp://macmillandictionaryblog.com မှ Kerstin Johnson ရဲ့ အစားအစာစားတာတွေ နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ပြောဆိုသုံးစွဲတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုံးတွေကို ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် နံနက်စာ/ နေ့လယ်စာ/ ညစာစားတာတွေ သုံးစွဲခေါ်ဝေါ်တာတွေအပြင် သရေစာစားတာ၊ အမြန်စားတာ၊ နည်းနည်းချင်းစားတာ၊ အသံမြည်အောင်စား နဲ့ အ၀အပြဲစားတာတွေကို ဘယ်လိုမှန်ကန်စွာသုံးနှုန်းရတယ်ဆိုတာကို ဖတ်ရှုချိန် (၅) မိနစ်အတွင်းမှာ လေ့လာနိုင်မှာပါ။
Have breakfast / lunch / dinner (နံနက်စာ / နေ့လယ်စာ / ညစာစားသည်)
အချိန်သတ်မှတ်ပြီးစားရသော အစားအစာကို စားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုသောအခါ “have” ကို အသုံးပြုပါသည်။
Have you had breakfast yet? (ခင်ဗျားနံနက်စာ စားပြီးပြီလား?)
He phoned while we were having lunch. (ကျွန်တော်တို့ နေ့လယ်စာ စားနေတုန်း သူ ဖုန်းဆက်တယ်။)
Have something to eat (တစ်ခုခုစားသည်။)
စားစရာတစ်ခုခု (သို့) အစားတစ်နပ်စားသောအခါ အသုံးပြုပါသည်။
We’ll stop and have something to eat when we get to Newcastle. (နယူးကာဆယ်(လ်) ရောက်တဲ့အခါ ရပ်ပြီး တစ်ခုခုစားကြတာပေါ့။)
Snack / haveasnack (အဆာပြေ / သရေစာစားသည်။)
အဓိက အစာစားချိန်တွေကြားမှာ အဆာပြေ/သရေစာ စားသောအခါတွင် အသုံးပြုပါသည်။
We usually haveadrink andasnack around 11. (၁၁ နာရီလောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ သောက်စရာတစ်ခုခုနဲ့ အဆာပြေတစ်ခုခု စားလေ့ရှိတယ်။)
No snacking on the bus, kids! (ကလေးတို့ ဘတ်စကားပေါ်မှာ သရေစာ မစားရဘူး။)
Grababite (to eat) (စားစရာတစ်ခုခုကို အမြန်စားသည်။)
အချိန်မရသည့်အတွက် အဆာပြေတစ်ခုခု (သို့) ထမင်းနည်းနည်းကို အမြန်အချိန်လု စားသောအခါ အသုံးပြုပါသည်။
Maybe we could grababite at Charlie’s before the film. (ရုပ်ရှင်မစခင် ချာလီ့ဆိုင်မှ တစ်ခုခုကို မြန်မြန်စားကြတာပေါ့။)
Eat up (အကုန်စားပါ)
မိမိ ကျွေးထားသည့် အစားအသောက်ကို ကုန်အောင်စားစေလိုသည့်အခါ အသုံးပြုပါသည်။
Eat up! There’s plenty more. (စားသာစားပါ။ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်။)
Nibble (at) (နည်းနည်းချင်း တစ်တိတစ်တိစားသည်။)
အစားအစာကို နည်းနည်းချင်းစီ ကိုက်စားသည်။
She nibbled at her sandwich politely, waiting for the others to arrive. (သူဟာ တခြား သူတွေရဲ့ အလာကို စောင့်ရင်းနဲ့ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကို တစ်တိတစ်တိစားနေသည်။)
Chew (on) (၀ါးစားသည်။)
Chew ၏ အဓိပ္ပါယ်သည် အစားအစာကို ၀ါးစားသည်ဟု ဖြစ်ပါသည်။
He was chewing onapiece of celery. (သူသည် တရုတ်နံနံပင်တစ်ပင်ကို ၀ါးစားနေသည်။)
Munch / munch at (အသံမြည်အောင်စားသည်။)
Munch / munch at သည် အစားအစာတစ်ခုခုကို အားရပါးရ အသံမြည်အောင် စားသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
The kids were munching crisps in front of the TV. (ကလေးတွဟာ TV ရှေ့မှာ အားလူး ကြော်ကို တကျွတ်ကျွတ်ဝါးစားနေကြတယ်။)
Stuff yourself (အ၀အပြဲစားခြင်း)
အရပ်သုံး(သို့) ရင်းနှီးသော အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ရင်ပြည့်အောင်၊ နေမကောင်းဖြစ်အောင် အလွန် အကျူးစားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
I’m not surprised you feel sick, the way you stuffed yourself last night. (ညက မင်းအ၀အပြဲ စားပုံနဲ့ဆိုရင် မင်းနေမကောင်းဖြစ်တာ ငါမအံ့သြပါဘူး။)
Macmillandictionaryblog.com မှ Kerstin Johnson ၏ Language tip of the week: eat မှ မှီငြမ်းဘာသာပြန်ဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Writing supporting sentences and details by Daw Tin Nwai Win
10 Techniques for Precise Writing by Daw Tin Nwai Win (ရှင်းလင်းတိက...
လုပ်ငန်းခွင်သုံး အင်္ဂလိပ်စာရေးသူများအတွက် အကောင်းဆုံး တည်းဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက် (၁၀)ချက်
ယနသေ့ငျခနျးစာမှာ http://macmillandictionaryblog.com မှ Kerstin Johnson ရဲ့ အစားအစာစားတာတှေ နဲ့ပါတျသကျပွီး ပွောဆိုသုံးစှဲတဲ့ အင်ျဂလိပျစာအသုံးအနှုံးတှကေို ဖတျရှုရမှာဖွဈပါတယျ။ ပုံမှနျ နံနကျစာ/ နလေ့ယျစာ/ ညစာစားတာတှေ သုံးစှဲချေါဝျေါတာတှအေပွငျ သရစောစားတာ၊ အမွနျစားတာ၊ နညျးနညျးခငျြးစားတာ၊ အသံမွညျအောငျစား နဲ့ အဝအပွဲစားတာတှကေို ဘယျလိုမှနျကနျစှာသုံးနှုနျးရတယျဆိုတာကို ဖတျရှုခြိနျ (၅) မိနဈအတှငျးမှာ လလေ့ာနိုငျမှာပါ။
Have breakfast / lunch / dinner (နံနကျစာ / နလေ့ယျစာ / ညစာစားသညျ)
အခြိနျသတျမှတျပွီးစားရသော အစားအစာကို စားခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ပွောဆိုသောအခါ “have” ကို အသုံးပွုပါသညျ။
Have you had breakfast yet? (ခငျဗြားနံနကျစာ စားပွီးပွီလား?)
He phoned while we were having lunch. (ကြှနျတျောတို့ နလေ့ယျစာ စားနတေုနျး သူ ဖုနျးဆကျတယျ။)
Have something to eat (တဈခုခုစားသညျ။)
စားစရာတဈခုခု (သို့) အစားတဈနပျစားသောအခါ အသုံးပွုပါသညျ။
We’ll stop and have something to eat when we get to Newcastle. (နယူးကာဆယျ(လျ) ရောကျတဲ့အခါ ရပျပွီး တဈခုခုစားကွတာပေါ့။)
Snack / haveasnack (အဆာပွေ / သရစောစားသညျ။)
အဓိက အစာစားခြိနျတှကွေားမှာ အဆာပွေ/သရစော စားသောအခါတှငျ အသုံးပွုပါသညျ။
We usually haveadrink andasnack around 11. (၁၁ နာရီလောကျဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ သောကျစရာတဈခုခုနဲ့ အဆာပွတေဈခုခု စားလရှေိ့တယျ။)
No snacking on the bus, kids! (ကလေးတို့ ဘတျစကားပျေါမှာ သရစော မစားရဘူး။)
Grababite (to eat) (စားစရာတဈခုခုကို အမွနျစားသညျ။)
အခြိနျမရသညျ့အတှကျ အဆာပွတေဈခုခု (သို့) ထမငျးနညျးနညျးကို အမွနျအခြိနျလု စားသောအခါ အသုံးပွုပါသညျ။
Maybe we could grababite at Charlie’s before the film. (ရုပျရှငျမစခငျ ခြာလီ့ဆိုငျမှ တဈခုခုကို မွနျမွနျစားကွတာပေါ့။)
Eat up (အကုနျစားပါ)
မိမိ ကြှေးထားသညျ့ အစားအသောကျကို ကုနျအောငျစားစလေိုသညျ့အခါ အသုံးပွုပါသညျ။
Eat up! There’s plenty more. (စားသာစားပါ။ အမြားကွီး ကနျြပါသေးတယျ။)
Nibble (at) (နညျးနညျးခငျြး တဈတိတဈတိစားသညျ။)
အစားအစာကို နညျးနညျးခငျြးစီ ကိုကျစားသညျ။
She nibbled at her sandwich politely, waiting for the others to arrive. (သူဟာ တခွား သူတှရေဲ့ အလာကို စောငျ့ရငျးနဲ့ အသားညှပျပေါငျမုနျ့ကို တဈတိတဈတိစားနသေညျ။)
Chew (on) (ဝါးစားသညျ။)
Chew ၏ အဓိပ်ပါယျသညျ အစားအစာကို ဝါးစားသညျဟု ဖွဈပါသညျ။
He was chewing onapiece of celery. (သူသညျ တရုတျနံနံပငျတဈပငျကို ဝါးစားနသေညျ။)
Munch / munch at (အသံမွညျအောငျစားသညျ။)
Munch / munch at သညျ အစားအစာတဈခုခုကို အားရပါးရ အသံမွညျအောငျ စားသညျဟု အဓိပ်ပါယျရပါသညျ။
The kids were munching crisps in front of the TV. (ကလေးတှဟာ TV ရှမှေ့ာ အားလူး ကွျောကို တကြှတျကြှတျဝါးစားနကွေတယျ။)
Stuff yourself (အဝအပွဲစားခွငျး)
အရပျသုံး(သို့) ရငျးနှီးသော အသုံးအနှုနျးဖွဈသညျ။ ရငျပွညျ့အောငျ၊ နမေကောငျးဖွဈအောငျ အလှနျ အကြူးစားခွငျးကို ဆိုလိုသညျ။
I’m not surprised you feel sick, the way you stuffed yourself last night. (ညက မငျးအဝအပွဲ စားပုံနဲ့ဆိုရငျ မငျးနမေကောငျးဖွဈတာ ငါမအံ့သွပါဘူး။)
Macmillandictionaryblog.com မှ Kerstin Johnson ၏ Language tip of the week: eat မှ မှီငွမျးဘာသာပွနျဆိုထားတာ ဖွဈပါတယျ။
Permalink Reply by Yimon Kyaw on December 22, 2015 at 10:15
Permalink Reply by Khin Minn No No on November 14, 2018 at 17:42